ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှလူတစ်ယောက်၏ IP ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း Gadget သတင်း
အခြား Facebook အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ IP လိပ်စာကိုသိထားပါ ၎င်းသည်သင့်အားသင်အနည်းငယ်ပိုကောင်းရန်နှင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးပြုသူအားသူအားပထဝီအနေအထားအရရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသိရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ IP တွင်ဂဏန်းပုံစံရှိသည်၊ သင်ထင်နိုင်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ ၎င်းသည်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသောနံပါတ်များမဟုတ်ပါ။ အချက်များဖြင့်ခွဲခြားထားသည့်ကိန်းဂဏန်းအုပ်စုလေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောကွန်ပျူတာတစ်ခုစီကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်လိမ့်မည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မက်ဆေ့ခ်ျများမှအိုင်ပီလိပ်စာကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည့်အရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်အချို့ကိုသင်ရှင်းပြပါမည်၊ သို့မှသာလျှင်မြန်စွာရယူနိုင်ရန်၊
မကြာသေးမီကတရား ၀ င်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်ပလီကေးရှင်းနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့လိုက်သောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုချင်းစီ၏အိုင်ပီကိုသိနိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ထိုလျှောက်လွှာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို၎င်းကိုတီထွင်သူသို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်ကိုယ်တိုင်ကပြုလုပ်သည် ပြီးတော့အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်ချလို့မရတော့ဘူး။
အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်သင် Facebook မှာသင့်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ IP ကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုရင်၊ အရင်ကရရှိခဲ့တဲ့ application ကိုအသုံးပြုရတာရိုးရှင်းတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး၊
2 တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ Facebook IP ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
2.1 သူတို့ရဲ့ IP ကိုဘာလဲနှင့်အတူအီးမေးလ်မှတဆင့် IP ကိုခြေရာခံ
2.2 Grabify အီးမေးလ်ကိုအသုံးမပြုဘဲ IP ကိုစစ်ဆေးပါ
3 Facebook IP ကိုခြေရာခံ
သင်သိလိုသော IP ကိုအသုံးပြုသူ မင်းကသူ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခိုင်းပြီးမင်းရဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းမှာပါ သင်၏ IP ကိုသိခြင်းသည်အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်သီချင်းဆိုခြင်းကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ Hotmail (သို့) ဂျီမေးလ်တွင်သင်ပို့လိုက်သောအီးမေးလ်အတွင်းရှိ reply menu သို့ ဝင်ရောက်၍ "မူရင်းပြရန်" ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ပြိုင်နက်သင်စာသားအတွက်ဘရောက်ဇာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြင့်သာရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ X-Origins-IP, ညာဘက်မှာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်၏ IP ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဤနည်းအပြင်အတော်လေးရိုးရှင်းသည်ဟုဆိုပါစို့၊ အချို့သောရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ကွန်ယက်ကွန်ယက်နှင့်ပြည့်နေသောအခြားသူများလည်းရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမင်းတို့နောက်တစ်ခုထားပေးမယ်။
အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါကဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါ မင်းရဲ့ ip ကိုဖုံးကွယ်နည်း
Facebook မက်ဆေ့ခ်ျများမှ IP လိပ်စာကိုရှာပါ
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ Facebook IP ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
Facebook မှသူစိမ်းတစ် ဦး ၏ IP ကိုအလျင်အမြန်သိရှိနိုင်ရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်သည်သုံးစွဲသူမှပေးပို့သောအီးမေးလ်မှတဆင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နည်းပညာကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုသိရင်သင်လုပ်ချင်တာကပိုများပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့အီးမေးလ်ကနေသင့်ရဲ့ IP ကိုတိုက်ရိုက်ရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကပလက်ဖောင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပလက်ဖောင်းကိုပိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်။ ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
သူတို့ရဲ့ IP ကိုဘာလဲနှင့်အတူအီးမေးလ်မှတဆင့် IP ကိုခြေရာခံ
ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ IP ဆိုတာဘာလဲကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ရာကိုသံသယမရှိဘဲသူလုပ်ချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပို့နေသောအသုံးပြုသူ၏အိုင်ပီကိုကျွန်ုပ်တို့လျှင်မြန်စွာရနိုင်သည်။ What's Алардын IP ဆိုသည်မှာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်သောအခါအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပေးမည့် link တစ်ခုပေးသည် IP သည်ထို link link ကိုသွားခဲ့သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ဆောက်နေဆဲစာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိနေသောသို့မဟုတ်တည်ရှိနေသောစာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိနေသောအချိတ်အဆက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လက်ခံသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင် URL တစ်ခုပို့သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သံသယဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
သူလည်ပတ်ရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်ဖော်ရွေနေ သ၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနေသောအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုသာရှာဖွေရမည်။ သူတို့ကိုသူတို့ကိုသင်မပို့နိုင်လျှင်၊ သူသည်သူမသိချင်စိတ်ကြောင့်သူမအနှေးနှင့်အမြန်ရောက်လာသည်။ အာမခံ။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သောအီးမေးလ်အကောင့်ဖြစ်သည် ၎င်းသည် link ကိုလာရောက်လည်ပတ်သော IP များစတင်ရရှိလိမ့်မည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် IP ၏တည်နေရာကိုဖော်ပြပေးသည့် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့သာသွားရမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုနောက်အခန်းတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ IP ကိုရှာဖွေရန်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရုံသာမကဘဲ မည်သည့်ပလက်ဖောင်းအတွက်မဆို၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်၎င်းသည်အီးမေးလ်ဖြစ်စေ၊ WhatsApp၊ Telegram၊ WeChat၊ ဖိုရမ်များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Facebook ကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။
Grabify အီးမေးလ်ကိုအသုံးမပြုဘဲ IP ကိုစစ်ဆေးပါ
ယခုအချိန်အထိသင်ဘာမှမသိသေးသောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏အီးမေးလ်ကိုရေးသောအခါမယုံပါနှင့်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက၊ သင်သည်ယာယီသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်အသုံးပြုသူမှလင့်ခ်ကိုနှိပ်သည့်အချိန်အထိစောင့်ရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအချိန်တွင်ဖန်တီးထားသောအကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဆုံးရှုံးလိုပါကအမည်မသိအီးမေးလ်စာမျက်နှာဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား
Grabify သည်ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်ယခင်နှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်ကိုအချိန်မရွေးထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လင့်ခ်ရှိနှင့်ပြီးချင်းသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်မတို့အထက်ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ သင်စောင့်ဆိုင်းရန်စိတ်မထားလျှင် Grabify သည်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ What's သူတို့ရဲ့ IP ဆိုတာမတူတာကကျနော်တို့ URL ကိုဖုံးကွယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူကနှိပ်လိုက်ရင်သူကသူတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်, ကျနော်တို့ဝဘ် www.facebook.com ရေးသားရပေမည် အပိုင်း၌ URL သို့မဟုတ်ခြေရာခံခြင်းကုဒ်အတည်ပြုရန်ရိုက်ထည့်ပါ။ Create URL ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်အသုံးပြုသူထံပေးပို့ရမည့် URL ကိုရှာသည့်နေရာတွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကူးယူပြီးကူးယူရန်သာလိုသည်။ အောက်ခြေရှိရလဒ်ကဏ္ section နှင့်နံပါတ်ပေါ်လာမည်။ ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှရရှိသော URL ကိုနှိပ်သူအသုံးပြုသူအားလုံး၏ IP လိပ်စာများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန် ကျနော်တို့ဝဘ်စာမျက်နှာကို update ရမယ် အသုံးပြုသူရဲ့ IP ကိုပြသနိုင်အောင်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေရန်နောက်အပိုင်းကိုသွားရန်လိုအပ်သည်။
Facebook IP ကိုခြေရာခံ
အိုင်ပီ သီးခြားနံပါတ်လေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ ငါတို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုင်စင်ပြားကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဆိုလိုတာကအဲဒီအချိန်ကအဲဒီ IP ကိုပဲသုံးနိုင်တယ်။ ဤကဲ့သို့သော IP ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သုံးနိုင်သည့်အခြားကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သူမျှမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သဲလွန်စရယူရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခြားတိုင်းပြည်များမှ IP များသုံးခွင့်ပြုသည့်ပရိုဂရမ်များရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည် Deep Web ကဲ့သို့တူညီသော Dark Web သို့အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုမှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သည်သို့မဟုတ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာငါတို့တွေဒီအချက်အလက်တွေကိုပေးတဲ့မတူညီတဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ အသုံးပြုသူတည်ရှိရာမြို့ပါဝင်သည်သတင်းအချက်အလက် သင်၏အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူအမည်နှင့်အတူ။ အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်၏အိုင်ပီလိပ်စာကဘာလဲဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ IP အသုံးပြုသောလူ ဦး ရေနှင့်တိုင်းပြည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူ၏ဒေတာနှင့် IP အသုံးပြုသော IP ကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိကိုပြသသည့်အပြင်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူအများစုသည်တက်ကြွသော IP များပေးကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ IP အသစ်ရရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ router သို့မဟုတ် modem ကိုပြန်လည်စတင်သည်။ အကယ်၍ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွင်ပုံသေ IP ရှိသည်၊ မဖြစ်နိုင်ပါက၎င်းအင်တာနက်မှဆက်သွယ်မှုမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်၊ သို့မှသာထိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှမည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မှကျွန်ုပ်တို့ထံကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံရောက်ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများတွင်ပြောင်းလဲနေသော IP ရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကပုံသေသတ်မှတ်ထားသော IP ကိုလိုချင်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အပြင်ဘက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ (သို့) router ကိုဆက်သွယ်လိုသည့်အချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုအတွက်အပိုပေးရမည်။ သို့သော်၎င်းအားလုံး၏အသုံးပြုမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီ။
r ကိုအဆင်သင့်Facebook မှာ astrear အိုင်ပီ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » တစ်စုံတစ် ဦး ၏ IP ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း
Jorge Barroso ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းများ၊ ပေးထားသောဖြေရှင်းချက်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်အောက်ပါပေးပို့သူအချက်အလက်ရှိသည် -
Jorge Barroso အားပြန်ပြောပါ
Carlos Luis ဟုသူကပြောသည်
အဲဒါအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာငါ့ကိုရှင်းပြပါ
carlos luis သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါရွှံ့နေပါစေကောင်းသောနေ့လည်ခင်း - inbox ကနေ - ငါ့ facebook အကောင့်ကိုဘယ်ကနေသူတို့လာရတယ်ဆိုတာငါသိနိုင်တယ်။ ciendo- လည်ချောင်းနာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသော
လူတွေကကြောက်လန့်နေကြတယ် ... အလုပ်မလုပ်ဘူး
မိတ်ဆွေကောင်းများ၊ စမ်းသပ်မှုများစွာပြီးနောက်သူမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းတဲ့ post, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Friend သူငယ်ချင်းအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရှည်လျားလွန်းတာကဒီ code ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကသင်ထည့်ရမယ်
cris alex သို့ပြန်သွားရန်
luzgardo peralta ဆံပင် ဟုသူကပြောသည်
ip address ကိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲ
luzgardo peralta hair ကိုစာပြန်ပါ
mery moreno ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါအန်ဒါဆင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ၊ မည်သည့်နေရာ၌ကျွန်ုပ်ထံစာရေးပါသနည်းကျွန်ုပ်၌အလွန်လေးနက်သောပြhaveနာရှိပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
mery moreno အားပြန်ပြောပါ
ဒီလိုမျိုး hardcoded code တွေကို header ထဲမှာရှာမတွေ့ဘူး
Jorge Barroso၊ မင်းဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာလဲ aleezesandoval @ hot@mail လား။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းအန်တီငါအလျင်အမြန်သိဖို့လိုတယ် Facebook ရဲ့ IP ဟာသူဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိတယ်။ သူကစပိန်မှာနေတယ်၊ ​​သူဟာချီလီကဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ တိုင်ကြားချက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jorge Barroso၊ မင်းဒီအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ သင်ငါ့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့နိုင်ပါတယ် joselardieri@hotmail.com နောက်လိုက်ဖို့ခြေလှမ်းတွေဘာတွေလုပ်နေလဲ ??? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏အိုင်ပီကိုသိချင်သော်လည်း encoded code ကိုမတွေ့ပါ။ !! သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်လျှင်, ငါ asap လိုအပ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျပို့သောပုဂ္ဂိုလ်၏ IP ကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်ကိုအဖြေပို့ပေးပါ
မင်္ဂလာပါ။ အမှန်တရားကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးဘူး။ မလာနိုင်ဘူး။ Jose barroso, ငါ့ကိုအဆင့်တွေပို့ပေးလို့ရမလား။ သင်ကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
ငါ့ကိုမင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြပါ၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ဖြစ်ပါသည် santis1986@hotmail.com
ဒါကြောင့်သူတို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီနိုင်ဘူး။ ငါဒီမေးလ်ထဲမှာငါ့အားရှင်းပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ခဲ့ဘူး။
၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားယေဘူယျ ip သို့ပို့သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်သည် encryption အီးမေးလ်များကိုပို့သောဆာဗာမှဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုမချိုးပါနှင့်၎င်းကိုအလုပ်မလုပ်စေရန်ကြိုးပမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကုဒ်ကိုစစ်ဆေးခြင်း ... bye
အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောယောက်ျားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အခြားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမတူအောင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်ရန်လိုသည်။ ကြည့်ရှုပြီးသည့်အခါ၎င်းသည်သတင်းစကား၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုကြည့်ပါက“ reply” link ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ၏ဟုတ်ကဲ့ဤတွင်ဖော်ပြထားသော code ကဲ့သို့ပေါ်လာလိမ့်မည်။ မကောင်းသောအရာမှာ၎င်းတို့ပေးသောလိပ်စာသည် broadband service provider ၏ server သို့မဟုတ်ယေဘုယျ IP address တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ မက်ဆေ့ခ်ျကိုသူ့ဟာသူပို့ပေးတဲ့ pc တစ်ခု ... ကောင်းပြီငါဆက်ကြည့်ဖို့စောင့်နေတယ် ...
သင်၏သတင်းအချက်အလက်အမှန်ကိုဤမျှအသုံးမပြုပါ။ IP ပေးပို့ပြီး IP သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်လျှင်…အမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ရှာဖွေနေသည့်အချက်အလက်များအားရှာဖွေရန်အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းမပြုပါနှင့်။ ။
ဒီဟာကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ယခုအီးမေးလ်များကိုပို့သောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဆာဗာတွင် proxy တစ်ခုရှိလာပြီ။ သင်ဤစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ localhost နှင့်တူညီသော IP 127.0.0.1 ကိုသာရနိုင်သည်။
ငါမူရင်းအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ၊ အချို့သောညွှန်းကိန်းနံပါတ်များသည်ဘယ်ဘက်နှင့်တစ်ဖက်စီတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ အခြားကော်လံတစ်ခုတွင်) အချက်အလက်များဆက်တိုက်ပေါ်လာသည်။ ထိုနံပါတ်များအနက်မှဖြစ်ပျက်နေသောအချက်အလက်များအရရှာဖွေသင့်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီး code ကိုဘယ်လိုရှာရလဲပြောပြပါ
ရုတ်တရက် !!!!!! 1
ဟလိုကောင်များ၊ IP လိပ်စာများကိုရှာဖွေရန်ကူညီရန် QM ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်သည်။ D QM စာတိုများရောက်ရှိလာသည်။ အကယ်၍ သင်၏အကူအညီသည်ထိရောက်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေရေးကြေးရေးသဘောတူညီချက်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ !
မင်္ဂလာပါကောင်လေး၊ ငါနဲ့ထပ်တူထပ်မျှပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​သူတို့ကငါ့ကိုငါ့မျက်နှာကိုမက်ဆေ့ခ်ျတွေပို့နေတယ်၊ ​​မနှစ်သက်ဘူး။ ဒီလူရဲ့ IP ကိုသိချင်တယ်။ ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒီဟာကိုငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလား?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား ?? လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကလူတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်အားစာတိုက်ပုံးဖြင့်စာများပို့နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိုနာကျင်စေသည့်အရာများစွာကိုပြောကြားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာထိုသူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်နီးစပ်မှုရှိမရှိသိရန်ဖြစ်သည်။ အဲဒီသံသယနဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးငါပြိုကွဲကတည်းကအခြားဆက်ဆံရေးကိုစတင်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
အဲဒါကို source code ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းရဲ့ program ကိုငါနားမလည်ဘူး
အဲလ်ဘတ်တိုရော်ဘင်ဆင်ပေးပို့သော Hotmail သို့ကျွန်ုပ် facebook စာတစ်စောင်ပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်မခင်ပွန်း၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည်သူ၏ခေါင်းကိုဖြည့်ကာကျွန်ုပ်သည် Facebook အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသူမအားစော်ကားသောစာများပေးပို့သည်ကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ ထိုအကောင့်ဘယ်မှာရှိခဲ့သည်ကိုသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်သိလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမနဲ့သူမသူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုရည်းစားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေကြတာပါပဲ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
maury Andres ဟုသူကပြောသည်
maury andres သို့ပြန်သွားရန်
ဂျိန်းဒီယရှေု Olvera ဟုသူကပြောသည်
ဒါကအရမ်းဆိုးတဲ့အရာပါ။ သူတို့ကမင်းကိုပြန်ပေးဆွဲတာ၊ ဟေး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုနှောင့်ယှက်တယ်၊ ငါတားဆီးတယ်၊ အစီရင်ခံမယ်ဆိုရင်၊ ငါ့ IP ကိုသိနေတုန်းပဲ
Jane DE Jesus Olvera အားပြန်ပြောပါ
YONSON နှင့် ဟုသူကပြောသည်
vane_maky နှင့်ဆင်တူသည့်အရာကကျွန်ုပ်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်၏နာမည်နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုဖန်တီးသည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုသံသယဝင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်၏အိုင်ပီကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
မင်းကငါ့ကိုစာမပို့ဘဲငါသီးသန့်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုကြည့်ရင်ပရိုဖိုင်းရဲ့ IP ကိုရှာတွေ့နိုင်သလား။
Alberto M. သို့ပြန်သွားရန်
Hello, ငါ့ကိုကူညီနိုင်သလား! contreraslopez.22@hotmail.com
မင်္ဂလာပါ၊ အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ ip ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားသင်ပေးနိူင်သည်။ အကြောင်းမှာ၊ Facebook အကောင့်နှစ်ခုက ip address ကိုပေးရန်၊ viwe အရင်းအမြစ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုနှောင့်ယှက်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ip ကိုရှာမတွေ့ပါ။ မင်းရဲ့အကူအညီကိုမျှော်လင့်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဘယ်လိုပို့မလဲ။ သတင်းစကားမှတဆင့် ??? ငါကသူတို့အီးမေးလ်ကိုမထုတ်ဝေသောသူတို့သည်အဘို့ငါဆိုလိုတယ် ??
ဂျော့ခ်ျ Flores CEILO ဟုသူကပြောသည်
တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကို IP ကိုရှာတွေ့အောင်ကူညီပေးတယ် ... X \_ t
JORGE FLORES CEILO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
Carla Rossell ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? ဒီလူရဲ့ IP ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
Facbook ရှိမက်ဆေ့ခ်ျများ fikltrados ဖြင့်ကျွန်ုပ်ထံသို့ပေးပို့သောသူ Alejandro F William ငါ့ကိုတိုက်တွန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
carla rossell အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီမိုဘိုင်းဖုန်းကနေကျွန်တော့်ကို Facebook မက်ဆေ့ခ်ျပို့တဲ့သူရဲ့အီးမေးလ်တချို့ရဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုသိလား။ ဒါပေမယ့်သူ့ဆဲလ်ကိုစက်ရုံထဲပြန်ထားပြီးပြီ ????
Osvaldo Páiz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျတွေပို့နေတယ်၊ ​​မှားနေတယ်၊ ​​ကျေးဇူးပြုပြီးသူတို့ဘယ်ကနေပို့တာလဲ၊ သူတို့ရဲ့ IP ကိုဘယ်လိုသိလဲ၊ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ၎င်းသည်အရေးတကြီးဖြစ်ပြီးအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။
ဖာနန်ဒို villaran garcia က ဟုသူကပြောသည်
သူတို့၏ ip la palmo ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပုံနှင့်ထို site ကိုရောင်းရန်တင်ထားရသည်
ဖာနန်ဒို Villaran Garcia သို့ပြန်ကြားချက်